Jery taratra… herinandro: mba hisy fiantraikany izay atao… | NewsMada
Nilaza hitory eny amin’ny fitsarana ny arsevekan’Antananarivo noho ny fahafatesan’ny pretra Soanavela Nicolas, voatifitry ny jiolahy teny Mahitsy ny 3 febroary. Famonoana no nanjo azy fa tsy bala tsy nahy. Sivy ireo olona nakarina fampanoavana fa voarohirohy tamin’izany, ary notanana am-ponja vonjimaika avokoa.
Nanofana ireo mpisehatra amin’ny fifidianana depiote amin’ny faritra 22 ny Ceni. Eo ny eo anivon’ny rafitra mpanamarina sy mpandrakitra an-tsoratra ny firotsahan-kofidina (Ovec) eny anivon’ny distrika. Eo koa ny antoko politika, ny firaisamonina sivily, ny mpampahalala vaovao. Niofanana izay tsara ho fantatra momba ny fifidianana.
Namoaka ny fanadihadiany, janoary-marsa 2018, ny Afrobaromètre: 44% ny nilaza fa manao kolikoly ny zandary sy ny polisy ary ny 39%, mahita izany amin’ny mpitsara. 70% ny manahy valifaty na voka-dratsin’ny fitoriana ny raharahan-kolikoly eny amin’ny Bianco. Mbola tsy araka ny tokony ho izy kosa ny demokrasia eto Madagasikara.
Iray volana izay ny fitondrana Rajoelina, nanao fianianana ny 19 janoary. Nilaza ny mpitondra tenin’ny governemanta fa maro ny fanapahan-kevitra tamin’izany: ny fanafoanana ny fanondranana omby any ivelany, ny fijoroan’ny birao andraisana ny fitarainana, ny tetikasam-pirenena hanampiana ny tanora amin’ny famoronana asa…
Tapaka tamin’ny filankevitry ny minisitra fa 151 ihany ny isan’ny depiote, ary iray isaky ny mponina 300 000. Tsy hisy famindrampo ny mpiasam-panjakana tratra manao kolikoly sy manodinkodinam-bolam-panjakana: hoenjehina araka ny lalàna, hoesorina amin’ny asany, manonitra ny vola, hamidy ny entana azony amin’izany.
Namoaka ny amboaram-panambarana faha-17, taona 2018, ny Sefafi: “Ny teo ihany no averina dia alefa indray ?” Nambaran-dry zareo tamin’izany fa andrasana ny tena fanovana amin’izao fitondrana vaovao izao: ny fomba fiasa sy fijery, ny fiadiana amin’ny fisian’ny tsimatimanota izay efa manomboka, ny lisi-pifidianana…
Izany rehetra izany, mba hisy fiantraikany amin’ny fiainam-bahoaka… hihatsara amin’izay?